Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247610 times)
« Reply #310 on: July 02, 2011, 04:32:56 PM »
" ကျေး ဇူး တင် တယ် "
ယာဉ်ထိန်းရဲသားအနီး ကားတစ်စီး ရပ်လိုက်ကာ ကားထဲမှ လူရွယ်က ကားတံခါးကို
ဖွင့်ပြီး ရဲသားကို ပြောသည် ။
" ခင်ဗျား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါပဲဗျာ..."
" ဘယ်လို ..ဘယ်လို ..ခင်ဗျားကို ကျနော် ဘာဆောင်ရွက်ပေးခဲ့လို့ လဲဗျ.."
" မနေ့ က ကျနော့်မိန်းမရဲ့ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ခင်ဗျား သိမ်းလိုက်တယ်လေ..
အဲ့ဒီအတွက် ကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးပါဘူး...သွားဦးမယ်နော်..."
" လူ လိမ် လူ ညာ "
တရားသူကြီးက လိမ်လည်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရသူကို ပြောသည် ။
" ခင်ဗျားအပေါ် ယုံကြည့်တဲ့ လူတွေကို ခင်ဗျားမို့လိမ်ရက်တယ်..."
" တရားသူကြီးမင်း ပြောတဲ့စကားဟာ ကျနော့်အတွက် ထူးဆန်းနေတယ်..
ကျနော့်ကို မယုံတဲ့သူတွေကို ကျနော် ဘယ်လိုလုပ် လိမ်နိုင်မှာလဲဗျ....
ယုံမှ လိမ်လို့ ရမှာပေါ့...."
« Reply #311 on: July 02, 2011, 04:44:10 PM »
" စိတ် မ ပူ နဲ့"
အရောင်းသင် ၀န်ထမ်းက ဆိုင်မန်နေဂျာကို ပြောသည် ။
" အခုထွက်သွားတဲ့လူက ဖိနပ်တစ်ရံကို ၀ယ်သွားတယ်..ဒါပေမဲ့
မနက်ဖြန်မှ ပိုက်ဆံ လာပေးမယ်လို့ပြောသွားတယ်..."
" ဘယ်လို .. ဘယ်လို ..ဒီလူ ဘယ်တော့မှ ပြန်လာမှာ မဟုတ်ဘူး.."
" လာမှာပါ...နှစ်ဖက်စလုံးကို ဘယ်ဘက်တွေချည်းပဲ ကျနော် ထည့်ပေးလိုက်တယ်.."
" စော စော က တည်း က "
" တရားခံ..တရားလိုရဲ့ခေါင်းကို ထိုးကြိတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ၀န်ခံသလား..."
" ၀န်ခံပါတယ်....ဒါပေမဲ့ ..သူ ခြေထောက်ခွင်နေတာကတော့ ကျနော်
" တစ် ပြိုင် တည်း "
" ဒေါက်တာ....ခွဲစိတ်ခံရမဲ့အစား ကျနော် သေသာ သေလိုက်ချင်တယ်..."
" အဓိပ္ပါယ် မရှိတာတွေ ပြောမနေပါနဲ့..နှစ်ခုစလုံးကို တစ်ပြိုင်တည်း
« Reply #312 on: July 08, 2011, 03:44:45 PM »
" ကု မ္ပ ဏီ ပိုင် ရှင် "
" ကျွန်ုပ်သာ ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင် ဖြစ်ခဲ့လျှင် " ဟူသော ခေါင်းစဉ်နှင့် စာစီစာကုံး ရေးရန်
ဆရာမက တပည့်တို့ ကို ပြောသည် ။ ကျောင်းသား အားလုံးလိုလို ကြိုးစားရေးကြသည်။
အီဗန် တစ်ယောက်သာ မရေးပဲ ပြတင်းပေါက်ဘက် ငေးကြည့်နေသည် ။
" ဟေ့.. အီဗန် . မင်းဘာလို့မရေးသလဲ.. "
" ကျနော် အတွင်းရေးမှူးမ ကို စောင့်နေတာ "
« Reply #313 on: July 08, 2011, 04:00:44 PM »
" က မ္ဘာ ကျော် လျှောက် လဲ ချက် "
" ကျနော့်ရဲ့အမှုသည်ဟာ ဘဏ်တိုက်ကို ဖောက်ထွင်းခဲ့ကြောင်း ရုံေးတ်ာကို ရိုးသားပွင့်လင်းစွာ
၀န်ခံထွက်ဆိုခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်..။ ဒီလို ရိုးသားပွင့်လင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ မှ
ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်နိုင်မဲ့သူ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ ပေါ်လွင်နေပါတယ်.. "
ရှေ့ နေပေါက်စက ပထမဆုံးအကြိမ် ရုံးတော်တွင် လျှောက်လဲချက် ပေးသည် ။
" တရားသူကြီးမင်း ခင်ဗျာ... ကျနော့်ရဲ့အမှုသည်ဟာ သူ့ ရဲ့ ရှေ့ နေ အဖြစ် ကျနော့်
ကို ရွေးတယ်ဆိုတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဆင်ခြင်တုံတရား အားနည်းနေတဲ့ အချက်
ကို သက်သေထူနေပါတယ်.. "
« Reply #314 on: July 08, 2011, 04:19:58 PM »
" အ စား ထိုး ပေး မယ် "
ဆိုင်ရှင်က အရောင်းစာရေး အသစ်ကို မှာကြားနေသည် ။
" အရေးအကြီးဆုံးက ကိုယ့်ဆီလာဝယ်တဲ့သူဟာ လက်ချည်းသက်သက် ဆိုင်ထဲက ထွက်မသွားစေဘို့ ပဲ..
သူလိုချင်တဲ့ ပစ္စည်း ဆိုင်ပေါ်မှာ မရှိရင် ဂိုထောင်ထဲမှာ သွားကြည့်....ဂိုထောင်ထဲမှာ မရှိရင် တစ်ခုခုကို
အစားထိုး ပေးကြည့်... "
နောက်တစ်နာရိခန့်အကြာတွင် ၀ယ်သူတစ်ယောက် ရောက်လာကာ အိမ်သာသုံး စက္ကူ လိုချင်ကြောင်း
ပြောသည် ။ ဆိုင်ပေါ်တွင် အိမ်သာသုံးစက္ကူ မရှိသဖြင့် အရောင်းစာရေးက ဂိုထောင်ကို ပြေးသည် ။
ဂိုထောင်တွင်လည်း ၀ယ်သူ လိုချင်သည့် ပစ္စည်း မရှိချေ..။ သို့ ဖြင့် အရောင်းစာရေးက ဤသို့အကြံပြု
" အိမ်သာသုံး စက္ကူတော့ အခု လောလောဆယ် ကုန်နေပါတယ် ခင်ဗျာ....... ဒါပေမဲ့ အကောင်းစား သံစား
ကော်ပတ် တော့ ရှိတယ်...။ ယူပါလား ဟင်... "
« Reply #315 on: July 09, 2011, 09:35:19 AM »
" သ တိ ပေး ချင် တယ် "
ယောင်္ကျားက မိန်းမကို မကျေမနပ်ဖြင့် ပြောသည် ။
" ဟေ့...ငါ့ကို အသုံးမကျတဲ့သူလို့ကလေးတွေ ရှေ့ မှာ မပြောနဲ့ လို့ 
မင်းကို ဘယ်နှစ်ခါ သတိပေးရမလဲ..ဟင်.. ငါ နားလည်အောင် .
အမူအရာနဲ့ပြရင်လဲ ရတာပဲ ဥစ္စာ.. "
" သ မက် လောင်း "
အသက်ထောက်လာပြီ ဖြစ်သော ကောင်းဘွိုင် တစ်ယောက် ဆရာဝန်ထံ
" ဒေါက်တာ...ကျနော့် သမက်ကို ကယ်ပါဦး.. မနေ့ က သူ့ ခြေထောက်ကို
ကျနော် သေနတ်နဲ့ပစ်မိတယ်.. "
" ကိုယ့်သမက် အရင်းခေါက်ခေါက်ကို ခင်ဗျားက ဘာဖြစ်လို့ပစ်ရတာလဲဗျ.."
" ဒီလိုပါ...မနေ့ က ကျနော်ပစ်တုန်းက ကျနော့်သမီးကို ယူဘို့သဘော
မတူသေးဘူး ခင်ဗျ.. "
« Reply #316 on: July 09, 2011, 09:47:55 AM »
" ချောက် ချ တဲ့ ကောင် လေး "
ချာတိတ်တစ်ယောက် ယာဉ်ထိန်းရဲထံ ပြေးလာသည် ။
" ဦးလေး..ကျနော့်နောက် အမြန် လိုက်ခဲ့ပါ "
" ကျနော်တို့ ရဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ကားမရပ်ရတဲ့ နေရာမှာ သူ့ ကားကို
ရပ်ထားတာ ပြမလို့"
" မ ငို ပါ နဲ့"
" ဒီလောက်အထိ ငိုမနေပါနဲ့ ကွာ...မင်း.. ပင်ပန်းပါတယ်... "
" ရှင် နဲ့ကျမ လက်ထပ်မှာကို ကျမ မိဘတွေက သဘော မတူဘူးတဲ့ .... "
" ဟုတ်ပါတယ်....ငါသိပါတယ်.. ၀မ်းနည်းမနေပါနဲ့ငါ နောက်တစ်
ယောက် ထပ်ရှာမှာပေါ့.. "
« Reply #317 on: July 09, 2011, 10:49:29 AM »
" ကွာ ရှင်း ချင် တာ ကြာ ပြီ "
အဖိုးကြီး နှင့် အဖွားကြီး လင်မယား နှစ်ယောက် သဘောတူ ကွာရှင်းလိုကြောင်း
တရားရုံးသို့လျှောက်လွှာ လာတင်သည် ။ အဖိုးကြီးမှာ ၁၁၅ နှစ်၊ အဖွားကြီးမှာ
အသက် ၁၀၀ ရှိကြပြီ ဖြစ်သည် ။ တရားသူကြီးက အဖိုးကြီးကို မေးသည် ။
" အဖိုး... ဘာဖြစ်လို့ကွာရှင်းချင်ရတာလဲ.. "
" ဒီ ဆံဖြူသွားကျိုးမ ဟာ ကျုပ်ကို တစ်သက်လုံး သစ္စာဖောက်ခဲ့တယ်..ကျုပ်ကို
မချစ်ခဲ့ဘူး...အိပ်ရာထဲကို ကော်ဖီ ယူမလာဘူး.. "
" အဖွားကကော ဘာဖြစ်လို့ကွာချင်ရတာလဲ .. "
" ဒီသေနာကြီးဟာ ကျုပ်ကို ၁၅ နှစ် အရွယ်မှာ အ ဓ မ္မ ကျင့်ခဲ့တယ်..တစ်သက်လုံး
ထမီ မြင်ရင် ငန်းငန်းတက် ဖြစ်တယ်.. သစ္စာ မဲ့တယ်.. "
တရားသူကြီး က နှစ်ယောက်စလုံးကို မေးသည် ။
" ဒါဖြင့်ရင် ဘာဖြစ်လို့စောစောက မလာသလဲ .. "
" သားသမီးတွေ သေကုန်တဲ့အထိ စောင့်နေရသေးတယ်လေ.. "
« Reply #318 on: July 12, 2011, 09:45:06 AM »
" ဟာ သ မ ပြော နဲ့"
မော်စကို တရားရုံး`၌ အမှု တစ်ခုကို စစ်ဆေးပြီး၍ တရားသူကြီးများ နားနေရာအခန်းသို့တရားသူကြီး တစ်ဦး
ရယ်မောပြီး ၀င်လာရာ အခြားတရားသူကြီးများက အကြောင်းအရင်းကို ၀ိုင်းမေးကြသည်။
" အင်မတန်ကောင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးဟာသတစ်ခုကို ကြားခဲ့ရလို့ ဗျ.. "
" ဒါဆိုရင် ကျုပ်တို့ ကိုလည်း ပြောပြပါဦး.. "
" ဒါတော့ မဖြစ်ဘူး.. ဒိနိုင်ငံရေး ဟာသ ပြောတဲ့သူကို အခုပဲ ထောင်ဆယ်နှစ် ကျုပ် ချခဲ့တယ်. "
« Reply #319 on: July 12, 2011, 09:51:44 AM »
" အ မှား "
နီကိုလိုင်က မိမိ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကို ပြောသည် ။
" ငါ လက်မထပ်မိခဲ့ရင် ကောင်းမယ်...၊ အခုပဲကြည့်.. ငါ မူးလာတဲ့အခါ
ငါ့မိန်းမက င့ါကို ကြည့်လို့ မရဘူး.. ငါကလဲ မမူးတဲ့အခါ သူ့ ကို ကြည့်
လို့မရ ဘူး "
" ထူး ခြား တဲ့ လင် မ ယား "
" ကျမတို့အိမ်ထောင်သက် ဆယ်နှစ်ရှီပြီ တစ်ခါတည်း နှစ်ယောက်အတူတူ
အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်ထွက်ဘူးတယ်.... "
" ဘာလဲ..ရုပ်ရှင် သွားကြည့်ကြတာလား... "
" မဟုတ်ဘူး.. အိမ် မီးလောင်လို့.. "